सेयर बजारमा यसरी गिरावट आउनुको खास कारण के ? - टि. एल. एन पोस्ट
Home अर्थ सेयर बजारमा यसरी गिरावट आउनुको खास कारण के ?
सेयर बजारमा मंगलबार पनि गिरावट आएको छ । सबै समूहका सूचक तल झरेका छन् । नेप्से सूचक पनि ६९.०५ अंकले घटेको छ । १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । केन्द्रीय बैंकको १२ करोड सीमा प्रकरणले सेयर बजार झारेको हो । मौद्रिक नीति तथा एकीकृत निर्देशनमार्फत एक जना व्यक्तिले अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, नवीकरण गर्दा यो सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने गरी निर्देशन जारी गरिएको छ ।
नवीकरणमा गरिएको यस व्यवस्थाले बजारलाई बेस्सरी प्रभावित बनाएको हो । यसअघि १२ करोड रुपैयाँभन्दा निकै बढीमात्रामा सेयर धितो कर्जा लिएकाहरुले अब नवीकरण गर्दा तोकिएको सीमामा ल्याउनका लागि सेयर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसको प्रभावस्वरुपः बजारमा बिक्रीकर्ता हावी भएको विश्लेषकहरुको भनाई छ । तर बजारले करेक्सनको निश्चित चक्र पूरा गरेपछि फेरि फर्किने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण विशेषगरी ठूला लगानीकर्ता प्रभावित भएका हुन् । साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई भने केही फरक परेको छैन । तर अधिकांश साना लगानीकर्ताहरु ठूलाकै पछि लाग्ने गर्छन् । बढ्दा किन्ने अनि घट्दा बेच्ने प्रवृत्ति यस्ता लगानीकर्ताहरुमा हावी भएको पाइन्छ ।
१२ करोडबाहेक केही हदसम्म बजार नियमित र स्वभाविक करेक्सनमा पनि गएको हो । नेप्से ३२ सय विन्दुभन्दा माथि गएपछि कारोबारीले नाफा बुक गर्न थाले । भाउ उच्च्तम विन्दुमा पुगेका बेला नाफा बुक गर्नेहरु सक्रिय हुन्छन् । यसबाट बजार केही करेक्सन हुनु स्वभाविक हो ।
बजारमा बेलाबेला यस्तो प्रवृत्तिहरु देखिइरहन्छ । घटबढ बजारको नियम हो । यसर्थ, लगानीकर्ताले योजनाबद्ध हिसाबले अघि बढ्न सक्नुपर्छ। किन्न सक्ने क्षमता, होल्ड गर्न सक्ने अवधि अनि कम्पनीको समग्र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। आम लगानीकर्ताले आफैंले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । आफू कस्तो प्रकारको लगानीकर्ता बन्ने, कतिपय होल्ड गर्ने अनि लाभांश क्षमता बढी भएकामा जाने वा कारोबार प्रकृतिको सेयरमा बस्ने भन्नेमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।
यसर्थ, आम लगानीकर्ताले योजनाबद्ध हिसाबले अघि बढ्न सक्नुपर्छ । लगानी गरिएका कम्पनीको नाफा, रिजर्भ, प्रतिसेयर आम्दानी, पीई अनुपात लगायतका प्रमुख पक्षहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छ । सकेसम्म अलिलामो समयसम्म होल्ड गर्ने हिसाबले लगानी गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा दिनहुँ हुने उतारचढावबाट प्रताडित हुनुपर्दैन ।
२२७ कम्पनीको २ करोड ३१ लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीसहित अरुण भ्याली हाइड्रोपावर अग्रस्थानमा रहेको छ । यसैगरी, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः हिमालयन डिष्टिलरी र अपि पावर परेका छन् ।
Previous articleकाठमाडौं उपत्यकाको फोहोर आजबाट उठ्ने
Next articleपहिरो छिचोल्दै दुर्गम क्षेत्रसम्म यसरी लगियो कोभिड भ्याक्सिन
समीट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थापक सेयरहरू बिक्री गर्ने भएको छ । संस्थाका संस्थापक सेयरधनीहरू नाममा रहेको ६१ हजार २ सय १५ कित्ता संस्थापक...
दशैंका लागि कहिलेदेखि नयाँ नोट वितरण गरिने?
यस वर्ष दशैंका लागि असोज ४ गतेबाट राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ।राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई...
तेह्रथुम पावर कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँड सम्पन्न, यी चार तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ रिजल्ट
TLN Post - September 10, 2021 0
तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको आईपीओ आज (भदौ २५ गते, शुक्रबार) बिहान १० बजे बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस...
तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ आज बाँडफाँड गरिने भएको छ । कम्पनीको आईपीओ आज (भदौ २५ गते, शुक्रबार) बिहान बाँडफाँड गरिने बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल...
महिनामा २० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् : ऊर्जामन्त्री
महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गर्ने उपेन्द्र पक्षको निर्णय
केही दिनमा अमेरिकाले नेपाललाई १५ लाख डोज भन्दा बढी खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने